WTE Drafitra CURRENCY DIGITAL - World Trade Exchange
AOKAO ho 100X ny vola azonao
Mandritra ny 30 andro amin'ny famoronana
NY CURRENCY anao manokana
Ny famoronana ny volanao manokana no lakilen'ny fanaovana 100X ny fidiram-bolanao ao anatin'ny 30 andro!
The World Trade Exchange sehatra no hany sehatra eto amin'izao tontolo izao manampy anao hampitombo ny vola miditrao amin'ny 100X ao anatin'ny 30 andro amin'ny alàlan'ny famoronana ny volanao manokana miaraka amin'ny tsindry ao anatin'ny 60 segondra.
Amin'ny alalan'ny WTE sehatra, ireto mpanjifa manaraka ireto dia nahazo fidiram-bola 100X tao anatin'ny 30 andro:
Lewes Hendon dia nampitombo ny vola azony tamin'ny 100X ary nahazo vola $ 750M tao anatin'ny 30 andro.
Brock Kosslyn dia nampitombo ny fidiram-bolany tamin'ny 100X ary nahazo vola 640M $ tao anatin'ny 30 andro.
Saundra Toedtling dia namadika tanjona fidiram-bola 12 volana ho fidiram-bola $ 600M.
Colan Wallace-brown dia nampitombo ny vola azony tamin'ny varotra 100X ary nahazo vola $ 100M tao anatin'ny 30 andro.
Taddeo Hatano-cohen dia nampitombo ny varony tamin'ny 100X ary nahazo vola $ 320M tao anatin'ny 30 andro.
Ny Deck Lisbon dia nampitombo ny fidiram-bolany 100X ary nahazo 550M fidiram-bola tao anatin'ny 30 andro.
Lenci Leakey dia nampitombo ny varony tamin'ny 100X ary nahazo vola $ 600M tao anatin'ny 30 andro.
Vinson Costantini dia nampitombo ny orinasany tamin'ny 100X ary nahazo vola 640M $ tao anatin'ny 30 andro.
ianao afaka 100X ny vola miditra ao anatin'ny 30 andro sy Ataovy amboara of Windfall Cash ho ny Bank Account … Isaky ny ianao Te!
Rehefa anao ny WTE sehatra, azonao atao ny mampitombo ny fidiram-bolanao amin'ny 100X na mihoatra ao anatin'ny 30 andro ary mametraka vola amam-bolam-baravarana ao amin'ny kaontinao isaky ny tianao!
Manome anao ny tombony ny vola manokana - ary ahazoam-bola “fiara”- izay afaka mitondra anao any amin'ny avo hatrany amin'ny fidiram-bolam-bola (mampihomehy fa ho vitanao izany mandritra ny fotoan-tsarotra). Vola an'arivony tapitrisa dolara no azon'ny olona (mitovy aminao) izay nianatra nampiasa ny herin'ny vola manokana. Fotoana izao mba hahazoanao ny anjaranao ara-drariny koa.
Ary - ity dia iray amin'ireo endrika mihantsy indrindra amin'ny vola manokana - isaky ny tianao, dia azonao atao ny mametraka vola am-bola ao amin'ny kaonty banky orinasa anao (na ny kitapom-bolanao manokana) ka hampatahotra anao.
Azonao atao amin'ny orinasanao manokana izany. Azonao atao amin'ny mpampiasa anao izany. Azonao atao amin'ny orinasa hafa izany. Azonao atao ho anao sy ny fianakavianao izany. Azonao atao ny manao ny efatra, ny safidinao.
maninona no mamoaka vola manokana?
Tombony 40 amin'ny famoahana
ny volanao manokana!
WITH wte sehatra, Azonao atao ny mampiasa ny volanao manokana hanaovana ANAO:
Mifindra ny sanda eo anelanelan'ny antoko amin'ny fepetra voafaritra mialoha. Ireo fandoavam-bola ireo dia azo alefa mandeha ho azy sy fehezina, miorina amin'ny alàlan'ny fivezivezena ny rojom-pivarotana sy ny tsindry efa voaomana mialoha.
Ampahafantaro ny mpanjifa afaka mividy, mivarotra, teboka varotra, ampandrenesina momba ny fifampiraharahana vaovao, na hanakalo valisoa amin'ny vola na entana any amin'ireo mpivarotra antsinjarany.
Afaka mamorona tsy voafetra ianao fividianana Hery at Ho!
Rehefa manana ianao a WTE sehatr'asa, azonao atao ny mamorona herin'ny fividianana tsy voafetra, fahefana mindrana, ary trosa asa-volamena 24 karat raha tianao. Isaky ny mila izany ianao. Araka izay ilainao azy. Isaky ny ilainao izany. Azonao atao, amin'ny fomba ara-bakiteny, ny manoratra ny tsipika fampindramanao (na ny fanamarinana) mankany amin'ny ambaratonga tsy manam-petra sy mahakivy.
Ny vola tsy miankina dia manome ny fahefana mividy REHETRA ilainao!
Isaky ny te hividy (na mila) mividy fananana, vokatra na serivisy ho an'ny orinasanao ianao, ho an'ny orin'olon-kafa, ho an'ny orinasan'ny mpampiasa anao, na ny filanao manokana na olon-kafa manokana - azonao atao ny mampiasa ilay WTE sehatra hamokarana "vola manokana" izay avotan'ny mpividy amin'ny fividianana entana na serivisy (na orinasa hafa na olon-kafa) amin'ny vidiny feno amin'ny lisitry ny "vidin'ny tsena" hividianana izay tianao hovidiana.
Buy tsy misy Money, mandany tsy misy Cash - Nmandrakizay mindrana or Aloavy Interest Indray!
Raha vantany vao manomboka mamorona sy mampiasa ny vola manokana ianao handaminana ny orinasanao na ny fifanakalozana ara-bola ataonao manokana, dia tsy mila miankina amin'ny findramam-bola intsony ianao intsony. Tsy mila miandry intsony ny kaontinao any amin'ny banky ianao vao afaka mividy fananana, vokatra na serivisy REHETRA izay ilanao na ny orinasanao - na tadiavinao raha mampiasa ny vola manokana ianao.
Tsy mila manana dime akory aza ianao ao amin'ny kaontinao -pahamendrehana mahazo entana na serivisy saika tsy manam-petra.
Tsy hisy hangataka mihitsy ny hahita ny fanambaranao ara-bola na hampanantena fananana anao na hiantoka manokana ny fifanakalozana vola manokana ataonao. Noho izany, ambany ny loza mety hitranga aminao - na tsia!
famoronana vola manokana no lakilen'ny
manangona kapital tsy voafetra ao anatin'ny 24 ora!
afaka manangona dolara an'arivony tapitrisa ianao ary mandoa trosa amin'ny fampiasana vola tsy miankina amin'ny alàlan'ny wte sehatra!
Azonao atao ny mamatsy vola amin'ny fitomboana haingana ary mampitombo ny harenanao amin'ny volanao manokana fa tsy vola!
Carnival Cruise Lines, sambo fitsangantsanganana an-tsambo any Florida izay zana-tsambo fitsangantsanganana lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao, dia natomboka tamin'ny sambo iray sy renivohitra miasa tsy ampy. Namorona vola manokana io tsipika io, izay nampiasaina hivarotana kabine banga ho an'ny radio, fahitalavitra ary fanaovana doka amin'ny tanàna 100 tao anatin'ny folo taona. Ny vidin'ny kabine banga raha vao mandeha ny sambo dia kely. Fanampin'izay, ny mpandeha dia mety handany vola be ao amin'ny trano fisotroana, casino, fivarotana fanomezana ary fitsangatsanganana amoron-dranomasina; noho izany, ny sandam-bola amin'ny zotra fitsangantsanganana hameno trano kely foana dia ambany noho ny aotra. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia nahazo tombony be izy ireo tamin'ny tranon'ny mpivarotra fa tsy mivoaka foana.
Ity ny valiny amin'ny zotra fitsangantsanganana. Nampiasain'izy ireo ity teknika ity mba ho lasa zotram-piaramanidina lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ary nanao dokambarotra tsy tapaka tany amin'ny tanàna 100 nandritra ny folo taona mahery nefa tsy nandany vola iray denaria. Tombanana ho an'ny mpandala ny nentin-drazana ny sandan'ny varotra novinaina $ 100,000,000. Ny tompon'ilay sambo fitsangantsanganana dia miliardera ankehitriny, ary ao amin'ny lisitra manankarena Forbes. Ary izy rehetra dia nanomboka tamin'ny sambo iray 30 taona sy dokambarotra mavesatra amin'ny fampiasana ny vola tsy miankina.
MAMORATRA NY CURRENCY ANAO PRIVATEO
IREO FOTOTRA MAFY ANJARA VAHAOLANA REHETRA
NY olanao sy ny tanjona tratranao!
NY FAMORIANA NY CURRENCY ANAO PRIVATE NO VAHAOLANA IREO OLANA BUSINESS REHETRA!
Orinasa solika no nahazo fotodrafitrasa vaovao mitentina $ 3.5 miliara ao anatin'ny 30 andro amin'ny fampiasana vola tsy miankina amin'ny alàlan'ny WTE sehatra.
Orinasa mpampitan-tsambo jet tsy miankina no nahazo fiaramanidina manokana 23 mitentina 575 tapitrisa dolara amin'ny fampiasana vola tsy miankina amin'ny alàlan'ny WTE sehatra.
Mpanamboatra vokatra indostrialy iray no nahazo milina, fitaovana ary famokarana turnkey vaovao mitentina 578 tapitrisa dolara amin'ny fampiasana vola tsy miankina amin'ny alàlan'ny WTE sehatra.
Orinasa mpamokatra orinasa iray no nahazo orinasa methanol mitentina 235 tapitrisa dolara amin'ny fampiasana vola tsy miankina amin'ny alàlan'ny WTE sehatra.
Vao tsy ela akory izay ny orinasan-tsolika iray dia nahazo fitrandrahana solika maodely ho an'ny solika solika miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra 20,000 XNUMX BPD amin'ny fampiasana vola tsy miankina amin'ny alàlan'ny WTE sehatra.
Giovanni dia nahazo orinasam-pividianana vola mitentina 123 tapitrisa $ 250 miaraka amina mpiasa 768 mampiasa vola tsy miankina amin'ny alàlan'ny WTE sehatra.
Orinasa mpamokatra vy dia nohavaozina ny fahafahan'ny zavamaniry miaraka amin'ny fampiasam-bola mitentina 75 tapitrisa dolara hampitomboana ny fahafaha-mamokatra amin'ny alàlan'ny vola tsy miankina iray amin'ny WTE sehatra.
NY FAMORIANA NY CURRENCY-nao no lakilen'ny fanatanterahana izay toa tsy mety sy mety!
miliardera sy orinasa 500 harena
mamorona & mampiasa vola manokana
manangona kapital ary mampitombo ny vola miditra!
NY ORINASA WALN DISNEY NAMORATRA CURRENCY AZON-TOA mba hampisondrotra vola an'arivony tapitrisa, hampitombo ny vidiny, hanao vola, handoavana ny trosa ary hampihena ny volany!
Tamin'ny 1987 The Walt Disney Company dia namorona ny volany manokana antsoina hoe 'Disney Dollars,' izay nampiasain'izy ireo hahazoana vola amina miliara dolara, nividy, nandoa trosa ary nampihena ny fandaniana vola nandritra ny 29 taona mandra-pijanon'izy ireo hamorona vola vaovao tamin'ny 2016. Na izany aza, ny dolara Disney efa noforonina dia mbola ampiasaina ao amin'ny Disney World, Disneyland, ary Disney Stores.
Maneran-tany, miliardera, orinasa Fortune 500, banky, orinasan-telefaona, trano filokana Las Vegas, ary ny The Walt Disney Company dia samy manangona renivola amina orinasa ary mampidi-bola amina miliara dolara amin'ny famoronana vola amin'ny rivotra madinidinika amin'ny fampiasana vola manokana. Mamorona vola izy ireo hanangonana renivohitra ary ahazoana tombony an-tapitrisany dolara ahazoana tombony izay tsy ananan'ny ankamaroan'ny mpandraharaha toa anao hatrizay.
AMAZON dia namorona sy mampiasa CURRENCY PRIVATE HANANGONANA DOLLARS AN'arivony tapitrisa, hampitombo ny vola azo, ary hampihena ny volany!
Nandritra ny taona maro, Amazon dia nampiasa vola manokana tamin'ny endrika karatra fanomezana mba hividianana vola an'arivony tapitrisa dolara bebe kokoa, hividianana ary hampihenana ny fandaniany vola.
Tamin'ny taona 2020, Amazon dia nanomboka namorona vola virtoaly ho an'ny fiantsenana manokana ataon'ireo mpanjifany an-tserasera. Ny vola virtoaly Amazon dia hamela ny mpanjifa “hanova ny volany ho lasa currency digital.” Amazon dia afaka nanao ny fanambarana momba ny vola virtoaly vaovao ho an'ny mpampiasa tsy ho ela.
Raha efa nanangona, nahazo, na nanome karatra fanomezana an'i Amazon ho an'iza ianao, dia nampiasa ny vola tsy miankina Amazon. Ny mahasamihafa azy fotsiny dia mety tsy tao an-tsainao mihitsy ny hoe afaka mamoaka ny volanao manokana ihany koa ianao.
FACEBOOK Mampiasa CURRENCY PRIVATE HAHAZOANA DOLLARA AN'arivony tapitrisa amin'ny fidiram-bola.
Tamin'ny 2011, Facebook dia nanangana vola manokana antsoina hoe 'Credits' hampiakarana ny vola azo amin'ny varotra amin'ny lalao milalao ao amin'ny Facebook. 'Credit' Facebook dia nampiasaina hividianana entana amin'ny lalao an-tserasera amin'ny alàlan'ny Facebook. Ny kaonty Facebook dia azo vidiana amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny carte de crédit, kaonty PayPal, telefaona finday, na fomba fandoavam-bola isan-karazany ary ivelan'ny Internet amin'ny toerana fivarotana maro. Ny krédit dia niasa tamin'ny taona 2011 ka hatramin'ny 2013 alohan'ny nilentehany. Facebook dia nahazo fidiram-bola amina miliara amina vola hafa amin'ny vola 'Credits'.
Tamin'ny taona 2019, Facebook dia nanambara vola nomerika iray manokana antsoina hoe Libra antsoina hoe 'Diem'), izay hivoaka amin'ny 2021.
Visa dia nametraka fangatahana patanty hamoronana ny volany nomerika.
Ny US Patent and Trademark Office (USPTO) dia namoaka tatitra tamin'ny taona 2020 fa ny Visa goavam-be Visa dia nametraka fangatahana patanty hamoronana vola dizitaly amin'ny solosaina afovoany izay mampiasa teknolojia blockchain.
Nilaza ny Tale Jeneralin'ny Visa Alfred Kelly fa mihevitra ny vola nomerika ho teknolojia fandoavam-bola mety hitranga ao amin'ny Konferansa Virtual JP Morgan TMC izy. “Tena misy ny vola nomerika - teknolojia fandoavam-bola mety hitranga izay tohananay. Tena mieritreritra izahay fa ny vola dizitaly dia mety hampiditra ny ekosistem fandoavam-bola mifanohitra amin'ny karazana fanoloana na ratsy ”, hoy i Kelly.
Mamoaka olana i SWMART ary MAMPIASA CURRENCE privé hananganana vola an'arivony tapitrisa, hampitombo ny vola azo, ary hampihena ny volany!
Walmart dia nampiasa vola tsy miankina isan-karazany amin'ny endrika karatra fanomezana, mari-pankasitrahana fanomezana, hajia varotra, tapakila fihenam-bidy, karatra telefaona, ary scrip mba hividianana fidiram-bola amina miliara dolara, hanaovana fividianana ary hampihena ny fandaniambola.
Raha efa nanangona, nahazo, na nanome karatra fanomezana Walmart, mari-pankasitrahana fanomezana ianao, tombokase momba ny varotra, tapakila fihenam-bidy, karatra telefaona, na scrip amin'ny olon-kafa, dia nampiasa vola manokana Walmart ianao. Ny mahasamihafa azy fotsiny dia mety tsy tao an-tsainao mihitsy hoe vola tsy miankina Walmart io ary azonao atao koa ny mamoaka ny volanao.
Miasa amin'ny volany nomerika manokana ny Citibank &
Ny Citigroup dia manampy ny governemanta manerantany hanangana vola digital
Ny Lehiben'ny Executive an'ny Citigroup Michael Corbat dia nilaza fa ny bankiny dia miasa amin'ny volany dizitaly ankehitriny ary manampy ny governemanta "erak'izao tontolo izao" amin'ny famoronana vola dizitaly ambony, na fantatra amin'ny anarana hoe banky nomerika banky foibe, na CBDC.
Raha niresaka tamin'i David Rubenstein tamin'ny hetsika zoma Bloomberg izy, dia nilaza mazava i Corbat fa fampandrosoana "tsy azo ihodivirana" amin'ny ho avin'ny vola ny CBDCs. Citigroup, ilay goavana amin'ny banky iraisam-pirenena, dia manampy amin'ny fanatontosana izany ho avy izany. "Niara-niasa tamin'ny governemanta eran'izao tontolo izao izahay momba ny famoronana sy ny fanaovana varotra" ny vola nomerika lehibe, hoy izy.
ankamaroan'ireo fikambanana AMPIASAO CURRENCY PRIVATE AS A BUSINESS EDGE / HEDGE!
Nanampy ireo orinasa fanta-daza izahay hampiasa vola tsy miankina ho toy ny «sisintany / fefy» lehibe ananan'izy ireo amin'ny fifaninanana. Ny iray dia gadra hotely. Ny iray hafa dia zotram-piaramanidina. Ny iray dia tambajotram-pahitalavitra. Ny iray hafa dia orinasa fiara. Ny iray hafa dia orinasan-tsolika. Ny iray hafa dia orinasa mpamokatra vy. Ny iray hafa dia orinasam-pitaovana manerantany. Ny iray hafa dia orinasan-tsambo. Ny iray dia orinasa elektronika sy orinasa hafa an'arivony manerantany. Azontsika atao ny mahafantatra ny haavon'ny tombony azo avy amin'ny haben'ny monster izay nampidirin'ny vola tsy miankina amin'ny vola farany azon'izy ireo, ary an-jatony tapitrisa dolara izany.
Ny famoronana vola tsy miankina irery no fomba tokana
ho an'ny zazalahy kely hampiakarana ny kianja filalaovana
… Ary ara-dalàna 100% izany!
RAHA MBOLA VOLA VOLA VOLA IZAO
sehatra na Tolotra TAMIN'NY lasa
… TSY FAHADISOANAO IZAO!
maninona no tsy nahomby daholo ny zavatra notadiavinao!
NAHOANA NO NANDRAY NY ZAVATRA REHETRA!
Raha very vola ianao, tsy nahatratra ny tanjonao, nahazo vokatra mahakivy tamin'ny fotoana hafa, sehatra, tsena, rafitra, vahaolana, paikady na drafitra taloha….
… TSY anao izany!
Izany dia satria ny fahafaha-manao hafa rehetra, sehatra, tsena, rafitra, vahaolana, paikady ary drafitra eto an-tany izay fantatro fa mifototra amin'ny volam-panjakana na volan'ny hafa!
Tsy azonao atao ny manome antoka ny fizotry ny vola na ny valin'ny vola tsy anananao.
Amin'ireo rafitra hafa rehetra nanandramanao taloha…
Firy amin'ireo mpamorona azy ireo no mamorona sy mampiasa ny volany manokana? Firy amin'izy ireo no namela anao hamorona sy hiasa amin'ny volanao manokana? TSY MISY!
Satria tsy tomponao na voafehinao ny vola nampiasaina tamin'ireo fotoana hafa mety, sehatra, tsena, rafitra, vahaolana, paikady na drafitra izay notadiavinao taloha, dia tsy azonao antoka ny valiny. Noho izany dia nahazo valiny mahakivy ianao.
Ilay fahombiazana WTE tsy mitovy mihitsy ilay sehatra ho hitanao…
Fomba vaovao hahazoana vola io.
Izany rehetra izany dia ny famoronana ny volanao manokana, ny fifehezana ny fizotry ny fitadiavam-bola ary ny fiantohana ny valim-bolanao amin'ny fifanakalozana rehetra.
Ary manana ny vintana ahazoana vola 100X ao anatin'ny 30 andro!
Mivavaka ny banky sy ny governemanta mba tsy hianaranao mamorona ara-dalàna ny volanao manokana!
Mivavaka ny banky fa tsy fantatrao fa afaka mamorona ny volanao manokana ianao satria ny fahafahan'ny olona mamorona ny volany manokana dia nofy ratsy indrindra an'ny banky.
Manantena ny Departemantan'ny Tahirimbolam-panjakana fa tsy ho hitanao ny fomba hamoronana ny "vola" anao manokana sy ny fahefa-mividy amin'izay hitiavany azy ireo ary handresy azy ireo ara-dalàna amin'ny lalaon'izy ireo manokana.
Orinasa Fortune 500 dia liana amin'ny hitazona ny tsiambaratelon'izy ireo amin'ny fampiasana vola manokana. Mahazo vola be loatra izy ireo ary mahazo tombony mifaninana tsy ara-dalàna amin'ny fampiasana vola tsy miankina.
Ny famoronana sy fampiasana vola manokana no hany fomba tokana hampihenan-dry zalahy kely ny kianja filalaovana… ary ara-dalàna 100% izany! 100 isan-jato no ara-dalàna ary matetika azo esorina ny haba, raha toa ny tanjona hampiasaina ary ampiasaina amin'ny antonony ny fifampiraharahana. (Manontania kaonty raha mila fanazavana manokana.)
Ary eo no misy ny Wte Tonga ny sehatra…
inona ny wte sehatra?
The wte sehatra no hany sehatra eto amin'izao tontolo izao manampy anao hampitombo ny vola miditrao amin'ny 100X ao anatin'ny 30 andro amin'ny alàlan'ny famoronana ny volanao manokana!
Izy io dia sehatra misy tanjona maro izay manana ny fahaizana manampy anao hamorona vola amin'ny 60 segondra amin'ny tsindry bokotra iray. Azonao atao ny mampiasa ny WTE sehatra hamoronana $ 10M, $ 100M, $ 1B, $ 100B, na mihoatra ao anatin'ny 60 segondra amin'ny tsindry bokotra iray.
Izy io dia ampiasain'ny Banky, Ivotoerana ara-bola, mpamatsy vola, rafitra vola vaovao, e-poketra, rafitra fandoavam-bola an-tserasera, mpamatsy vola virtoaly, mpivarotra orinasa, fifanakalozana varotra varotra, fifanakalozana entam-barotra, orinasam-pifaneraserana, orinasam-barotra B2B, ary andrim-panjakana .
IZAY MAHAY MAMPIASA NY WTE PLATFORM miaraka amin'ny bokotra bokotra!
tsy mila fahaizana teknika
HAMORATRA NY CURRENCY ANAO PRIVATE!
Mamorona vola manokana amin'ny alàlan'ny WTE Ny sehatra dia mora toy ny fikitihana na fikasihana efijery solosaina / telefaona handefasana mailaka. Raha azonao atao ny manindry totozy amin'ny solosaina na mikitika efijery finday handefasana mailaka dia afaka mamorona vola ianao ao anatin'ny 60 segondra. Ny famoronana vola manokana dia dingana "point-and-click" - tsy misy sarotra mihitsy. Topazo maso ny fampisehoana horonantsary etsy ambany raha hijery ny fomba nanaovany azy - $ 10M noforonina tao anatin'ny 60 segondra.